KITRA-FIFANINTSANANA MONDIALY : Fanohanana sy fitonian-tsaina no ilain’ny Barea
Misy tsy maty voalavo an-kibo mandetika hatrany ny tontolon’ny fanatanjahantena eto Madagasikara. 13 septembre 2021
Niseho izany nandritra ity fiomanana hiatrika ny lalao fifanintsanana hiadiana ny tompon-dakana eran-tany hifanandrinan’i Bénin sy ny ekipam-pirenena Malagasy na Barea. Mandroso mihemotra toa lelon-jaza ny federasiona Malagasin’ny baolina kitra sy Ingahy Arizaka Raoul izay tsy eto an-toerana akory fa mialokaloka any ivelany any. Mametraka ny dian-tanany eo amin’ity sehatra ity hatrany anefa ny lehilahy satria fantatra fa izy ihany no ao ambadik’ireny sembantsembana sy “sabôtazy” niteraka ny olana teo anivon’ny FMF ireny. Soa fa nivaha ny olana rehefa nanelanelana ny Filoha Andry Rajoelina.
Raha ny hita ao amin’ny Federasiona Malagasin’ny baolina kitra izay rafitra atao hoe mahaleo tena miandraikitra ny kitra eto an-toerana dia mizara roa mazava ny hevitra : an-daniny iraisan’ireo tena tia ny fanatanjahantena ka miezaka hatrany manarina ny federasiona, an-kilany iarahan’ireo mpiray petsapetsa amin’ny fikatsahana tombontsoa manokana ka tsy mihevitra izay hanasoavana ny tontolon’ny fanatanjahantena fa miezaka kosa manatsara ny vola miditra mankany am-paosiny manokana. Nanomboka tamin’ny fanesorana an’i Nicolas Dupuis tsy ho mpanazatra no efa nanomboka ny ady an-trano tao saingy takona ihany rehefa niditra an-tsehatra ny lehibe.
Ekipa tsy azo hamaivanina
Mila ampianarina ny mpitantana sy tompon’andraikitra eto Madagasikara ve fa mila fitonian-tsaina ny fiatrehana lalao goavana tahaka itony fifanintsanana hiakarana any amin’ny mondialy itony ? Ny tsy fahaizana mandrindra ireny fanapahan-kevitra raisina ireny dia sady mety hahavoasazy antsika no hampidi-kizo indray ny ekipam-pirenena. Tsara ny manamarika fa ny ekipan’i Bénin izay mifanandrina amin’i Madagasikara etsy amin’ny kianjabe Mahamasina dia ekipa tsy azo tsinontsinoavina. Mila fiomanana amin’ny lafiny rehetra izany ary mila fitonian-tsaina sy fanohanana avy amin’ny rehetra. Mahavaky vava ny vahiny satria tsy dia fahita amin’ ny Firenen-dehibe amin’ny taranja baolina kitra ny olana lava nolalovan’ny tontolon’ny fanatanjahantena, indrindra ny resaka kitra teto an-toerana.
Ry zareo Frantsay dia mahasahy manakarama mpilalao lafo dia lafo mihitsy hitazomany ny voninahiny ary an-taonany maro no efa anomanany izany. Aiza ho aiza anefa ny eto Madagasikara ? Zatra ny ampitso lava sy manantena vintana mitongilana ka na ny fanomanana ireo kilonga hiatrika sy handimby ny zoky am-perinasa aza tsy atao akory fa iandrasam-bahiny tsy ho avy. Miandry ny fitoviam-pijerin’ireo mpikambana ao amin’ny komity mpanatanteraka ny ady hatrehany amin’ny fifanintsanan’ ny “Mondial 2022” sy CAN 2023 na amin’ity na amin’ny lalao manaraka mbola ho avy.
Tompon-trano tsy mahaloa-bary
Nahavaky vava ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena moa ireny fihetsika ireny ka nilazany fa : “tsy ekena ny fanaovana takalon’aina ny baolina kitra malagasy hoentina miaro ny tombontsoan’ny olona iray manokana”. Nilaza mazava moa ny teo anivon’ny Minisitera tamin’io fa na izy ireo aza sahirana tamin’ny fanomanana ny lalao sy ny fitaterana ny Barea amin’ny fihaonana amin’ny ekipam-pirenena Tanzaniana, izay hotanterahina amin’ny 07 septambra 2021 ho avy izao, izay ny FMF no tokony hiandraikitra ny fikarakarana izany. Hatreto anefa dia toa tompon-trano tsy mahaloa-bary hatrany ny FMF ka izy ireo antenaina indray no lasa enta-mavesatra ampiana lava amin’ny fanapahan-kevitra raisina.
Tompon’andraikitra eo anivon’ity rafitra ity mihitsy, araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina no manipy hoditr’akondro tsy handrosoan’ ny kitra Malagasy. Ny teo anivon’ny Federasiona no nanoratra tany amin’ny CAF fa handray mpilalao hatrany amin’ny 15 000 isa ny kianja barea na tsy fanapahan-kevitra niaraha-nanapaka sady tsy voadinika aza ireny. Izy ireo koa no nahatara ny famoahana ny lisitr’ireo tena mpilalao hiatrika ny lalao hifanaovana amin’i Bénin. Araka ny fanazavan’ny avy amin’ny Minisitera ihany koa dia afaka niatrika ireny lalao iraisam-pirenena maro tamin’ny lasa ireny ny Barea noho ny fanohanan’ny Fitondram-panjakana malagasy azy ireo. Koa melohin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ireo fihetsika manimba sy manapotika ny baolina kitra malagasy.
Tsy fandraisana andraikitra, tandrevaka, sakantsakana samihafa, fikorontanana ara-pitantanana no hita sy tsapa teo anivon’ny fitantanana ny baolina kitra malagasy eo anivon’ny FMF, araka ny fanazavana hatrany. Na eo aza anefa izany rehetra izany dia miantso fitoniana sy firaisan-kina avy amin’ny vahoaka malagasy tsivakivolo ho fanohanana ny ekipa malagasy Barea ny Minisitera, izay milaza ny fahavononany amin’ny fanandratana avo ny voninahi-pirenena amin’ny alalan’ny Fanatanjahantena. Ny alakamisy 2 septambra 2021 tolakandro moa no hotanterahina ny lanonana ara-panjakana « fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny Kianja Barea ». Hanatrika ity lanonana ity ilay kintan’ny baolina kitra iraisam-pirenena Samuel Eto’o izay efa nigadona teto Madagasikara, omaly alarobia 01 septambra 2021. Ny harivan’io kosa no hatao ny lalao hifanandrinan’i Madagasikara sy Bénin ao anatin’ny fifanintsanana hiatrehana ny fiadiana ny amboara eran-tany na Mondial 2022 hatao any Qatar. Ny Sabotsy 4 septambra 2021 tolakandro kosa no hatao ny lanonana goavana « Fitokanana amin’ny fomba ofisialy ny Kianja Barea » miaraka amin’ny vahoaka sy ny ekipam-pirenena Barea ary hafanain’ny mpanakanto maro.
Marihina fa nahazo fankatoavana farany avy amin’ny Kaonfederasionin’ny kitra afrikanina (CAF) ny kianja Barea etsy Mahamasina. Tamin’ny talata hariva, efa tamin’ny fito ora no namory mpanao gazety tetsy amin’ny efitrano fanaovana kaonferansy ho an’ny mpanao gazety etsy amin’ny kianja Barea Mahamasina ny Tompon’andraikitra voalohan’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Hawel Mamod’Ali. Vaovao mahafaly no nozarainy ho an’ny vahoaka Malagasy ka voalohany amin’ireny, nahazo ny fankatoavana farany amin’ny maha manaraka ny fenitry ny FIFA sy ny CAF azy ity kianja ity an-kilany izay fa an-daniny, mpijery miisa iray alina no ho afaka hanatrika ny lalaon’ny Barea sy ny Ecureuils an’i Bénin, rahampitso alina. Lalao izay hanomboka amin’ny fito ora hariva ka tsy hifarana raha tsy amin’ny sivy ora alina.
Telo lahy ireo mpanao fitsirihana avy amin’ny CAF nijery ity fotodrafitrasa ity antsipiriany omaly antoandro ka ny hariva no nivoaka ny fanapahan-kevitry ny rafitra manam-pahefana ho amin’izany ary dia izay no antony nahatratra aoriana ny fanambaràna ofisialy avy amin’ny Minisitra tompon’andraikitra. Ny Filoha Rajoelina moa no nangataka ny fiavian’izy ireo taty ary dia izao azo soa aman-tsara izao ny fankatoavana avy amin’ireo rafitra mahefan’ny baolina kitra ireo. Efa ny fiandohan’ny herinandro teo kosa no tonga ireo mpilalao ambiny miisa fito mandrafitra ny Barea hiatrika izao lalao indroa misesy etsy Mahamasina sy any Tanzanie izao. Efa ao avokoa ireo nantsoina hiatrika ity lalao ity afa-tsy i Marco Ilaimaharitra sy Jérémy Morel ihany izay maratra. Efa naneho ny mpanazatra, Eric Rabesandratana fa tsy misy olana akory ny tsy fahafahan’izy roa lahy ireo satria manana mpilalao hafa mahasolo azy isika. Hatramin’ ny alatsinainy tolakandro no efa nanomboka nanitsaka ny kianja Barea ireo mpilalaontsika ary ny talata hariva taorian’ny tamin’ny fito ora ihany koa dia nanao fanazaran-tena tao izy ireo. Miezaka mifehy ilay fotoana alina mifanandrify amin’ny ora hanaovana ny lalao mihitsy araka izany ny teknisianina. Alefa Barea !